Apple wuxuu go'aansaday inuu soo celiyo HomePod asalka ah | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu go'aansaday inuu soo celiyo HomePod asalka ah
Apple waxay go'aansatay in la gaadhay wakhtigii dib loogu soo celin lahaa HomePod-kii asalka ahaa. Qoraal ay soo saartay shirkadda, wuxuu go'aansaday inuu joojiyo qaabkii asalka ahaa la bilaabay afar sano ka hor iyadoo loo daneynayo walaalkeed ka yar oo la bilaabay dhammaadka sannadka 2020. Waqtigan xaadirka ah moodooyinka qaar wali waa la iibinayaa laakiin ma ahan dhammaan Dukaammada Apple ama Webka.
HomePod-kii asalka ahaa ayaa la sii daayay afar sano ka hor wuxuuna ahaa ku hadla af-hayeenka Apple ee qiimaha ay shirkaddu iska leedahay. Taasi waa sababta aysan u guuleysan karin sidii la filayay. Intaas waxaa sii dheer, wax badan lama cusboonaysiin afartan sano laakiin qiimuhu isma bedelin taasna sidoo kale waxay qaadataa dhibkeeda. Xitaa iyadoo sidaas ah, qof kasta oo haysta wuu ku faraxsan yahay, gaar ahaan tayada codkiisa. Si kastaba ha noqotee, adeegsadayaashu waxay raadinayaan wax kale waana taas sababta bilaabay 2020 nooca ugu casrisan iyo kan yar ee af-hayeenkan. HomePod mini isku mid uma eka laakiin waxay umuuqataa inay kasii guuleysato waana taas mida shirkadu rabto.
Milkiilayaasha HomePod waxay awoodi doonaan inay sii wataan cusbooneysiinta aaladda Apple Care inkasta oo aan aaminsanahay inay jiri doonaan wax yar oo soo bixi doona. Waa dhimashada gaabiska ee aalado yar. Qoraalka ay soo saartay shirkadda, waxaad ka akhrisan kartaa:
HomePod mini wuxuu ahaa mid la garaacay tan iyo markii ay bilaabatay dayrtii la soo dhaafay, taas oo macaamiisha siisa dhawaq aan caadi ahayn, caawiye caawiye, iyo xakamaynta aqliga guriga oo kaliya $ 99. Waxaan diirada saareynaa dadaalkeena HomePod mini. Waxaan joojineynaa HomePod asalka ah, Way sii socon doontaa inay diyaar ahaato inta alaabtu socoto illaa Apple Online Store, dukaamada tafaariiqda tufaaxa iyo iibiyayaasha idman ee idman Apple waxay siin doontaa macaamiisha HomePod cusbooneysiinta barnaamijyada iyo adeegga iyo taageerada iyada oo loo marayo Apple Care.
Waqtigan xaadirka ah iyada oo loo marayo Websaydhka Spain waad iibsan kartaa labada nooc, ma ahan tan caalamiga ah. Markay kaydku dhamaadaan mar dambe ma awoodi doontid inaad kasbato dukaamada shirkadda, kaliya iyada oo loo marayo dukaamada ama dhinacyada saddexaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple wuxuu go'aansaday inuu soo celiyo HomePod asalka ah
AirPods-ka cusub ee 3 ayaa diyaar u ah shixnad sida ay sheegayaan warar cusub
Chrome M89 wuxuu balan qaadayaa isticmaalka ilaha hoose ee macOS